07 | March | 2014 | A poetic channel by Ram Tamang
मार्टिन लुथर किङ प्रति ।
जिन्दगी उचाईमा जिउने धेरै रहर थियो अफशोच कसैको थिचाईमा जिईरहेको छु । पापडको बेलाई भन्दा पनि धेरै कामको पेलाई अझै असह्य भैरहेको अनुभव गर्छु । हैन यो झारपात जिन्दगीबाट पात-पतिङ्गर जिन्दगीमा पाईला नसरेकै हो त? (आफैले आफैलाई प्रश्न ।) रौनक तथा उल्लासय शुभप्रभात मित्रहरू तथा जन्मदिनको शुभकामना मार्टिन लुथर किङ प्रति ।
Posted on March 7, 2014 | Quote
नेपालमा लोडसेडिङ्ग किन?
दुबईमा कुनै शुक्रबार रामको भेट नारायण, प्रकाश, शिव, सिताराम, हरि, विष्णु, कृष्ण तथा अन्य साथीहरूसंग नेपाली चोक (जसलाई हिजोआज पिरती डाँडा भनेर नामाकरण गरिएको छ) मा हुन्छ । त्यही क्रममा,
रामः प्रकाश तिमी यहाँ? त्यस्तो राम्रो जागिर छोडेर किन नि?
प्रकाशः नेपालमा त्यो नाथे तलबमा को काम गर्छ यार, महंगी यस्तो बढेको छ कि, जस्ले यहाँ धकेल्न बाध्य बनायो मलाई ।
नारायणः म पनि त्यही भएर मुसलमानको शरणमा छु यार नेपालको लोड सेडिङले गर्दा खोलेको कम्प्युटर पसल पनि लिलामी भो त्यसैले म पनि यहाँ ।
(सबैले आआफ्नो दुखेसो सो भेटघाटमा पोखे । त्यतिकैमा रामले हाँस्दै भन्यो ।)
रामः नेपालमा लोडसेडिङ्ग हुने प्रमूख कारण पत्ता लाग्यो नि?
सितारामः भन भन के हो त्यो?
रामः नेपाल मन्दिरै मन्दिरको देश, जहाँ पहिले भगबानहरू प्रशस्त बस्थे । अब हिजोआज ती सबै भगबानहरू यहाँ मुसलमानको देशमा आए पछि अँध्यारो हुन्न त? तिमी आफै भननः उ त्यो शिव, कृष्ण, हरि सबै यहाँ आएको छ हुँदा हुँदा प्रकाश र तेजमान पनि यहाँ आए पछि नेपाल अन्धकार हुने स्वभाविकै भै हाल्यो नि कि कसो?
सबै गलल हाँस्छन् । हा हा हा …
साँच्चै नै ।
साँच्चै नै तिम्रो याद आउँछ,
जिन्दगीमा टाढा गए पनि ।
साँच्चै नै तिम्रो माया लाग्छ,
दुई मुटु टाढा भए पनि ।
हरेक कथामा तिम्रो साथ पाउने गर्छु,
हरेक व्यथामा तिमीलाई याद गर्ने गर्छु ।
हौसला दिने तिम्रो, अनौठो त्यो यौबन ।
हरपल सुम्पेको छु, मेरो यो जोबन ।
हरेक बेहोशीमा तिम्रो गीत गाउने गर्छु,
हरेक खुशीमा तिमीलाई प्रित लाउने गर्छु ।
प्रेरणा दिने तिम्रो, मधुर मुस्कान ।
हरदम सम्झेको छु, तिम्रो त्यो धडकन ।
– राम तामाङ
जनवरी २०१३, फुजैराह, संयुक्त अरब ईमारात
नेपालतिर हरेक छोरा मान्छेलाई ‘बाबु’ भनेर मायाले सम्बोधन गरे जस्तै अरब तिर हरेक छोरा मान्छेलाई मायाले ‘अह्मद’ भनिदों रहेछ ।
सामुन्द्रिक चट्टान ।
यो सामुन्द्रिक चट्टानले पनि जिन्दगीमा गर्नु गर्यो भन्दै रूदै कराउँदै मेरो अघिबाट एक जना नेपाली हल्लिदै र ढल्मलाउँदै गयो । उस्ले भनेको वाक्य मेरो दिमागमा धेरै पल्ट ठोक्कियो तर पनि भन्न खोजेको कुरा ठम्याउन सकिन । बल्ल पो थाहा पाएँ रक्सी (Rock+Sea) को अंग्रेजी कोड त सामुन्द्रिक चट्टान पो रहेछ । म त हाँस्नु हाँसे ।
साथीभाईले तँ, तेरो, तलाई भनेर सम्बोधन गर्दा लाग्छ तिमी, तिम्रो र तपाई भन्ने शब्दनै नेपाली शब्दकोषमा छैन कि भन्ने भान हुन्छ । आफूभन्दा ठूलोको आदर र सानोको सम्मान गर्नु हाम्रो समाजले भुल्न थालेको होकी भन्ने लाग्छ ।